लालबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ : नगर प्रमुख - नेपालबहस
लालबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ : नगर प्रमुख
| १४:३४:४४ मा प्रकाशित
८ चैत,सर्लाही । प्रदेश नं २ मा पर्ने ‘लालबन्दी नगरपालिका’ मुख्य व्यापारिक क्षेत्र पनि हो । सत्र वडा रहेको नगरपालिकाका सिमाना पूर्वमा ईश्वरपुर, पश्चिममा हरिवन र हरिपुर, दक्षिणमा हरिपुर र ईश्वरपुर नगरपालिका तथा उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । नगरपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल दुई सय ३८।५ वर्ग किलोमिटर फैलिएको छ । विसं २०६८ को जनगणनानुसार नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ५९ हजार ३९५ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । नगर विकास कोषले नगरपालिकालाई नेपालकै उत्कृष्ट घोषित गर्दै सम्मान गरेको छ । नगरपालिकाका गतिविधिलगायत विषयमा नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधि शङ्खर पहाडीले गरेको कुराकानीको अंशः
राससः नगरपालिकाले कृषि विकासका लागि केकसरी काम गर्दै आएको छ ?
खड्काः यहाँका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेशामा आबद्ध छन् । हामीले हरेक वर्ष पशुपालनतर्फ उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई रु १० हजार दिएर सम्मान गर्ने गरेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि फलफूल राम्रो उत्पादन गर्ने कृषकलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन ।
राससः उत्कृष्ट काम गरेको भनी नगर विकास कोषले लालबन्दी नगरपालिकालाई सम्मान गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो रु
राससः तपाईं निर्वाचित हुनुअघि र निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् रु
राससः नगरपालिकामा ठूला योजना तथा परियोजना केके छन् ?
राससः तपाईंको नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो उद्योग वा व्यापारिक कम्पनी कुन हो ?
राससः सबैभन्दा धेरै कर कुन कम्पनीले तिरेको छ ?
राससः आफ्नो नगरपालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ?
राससः नगरपालिकाले युवालाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ?
खड्काः नगरपालिकाभित्र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत पनि रोजगार दिँदै आइरहेका छौँ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थालगायतसँग सहकार्य गर्दै केही युवालाई कृषि पेशामा संलग्न गराएका छौँ । केही युवालाई भने विकास निर्माणलगायतका काममा पनि लगाइरहेका छौँ ।
राससः विकासनिर्माणको काम कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ?
खड्काः नगरपालिकामा अहिलेसम्म भएका विकासनिर्माणको काम प्रभावकारी छन् । हामीले अरुमार्फत काम गराउँदा पनि स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामीले आशा गरेअनुसार विकासनिर्माणको काम भइरहेको हुनाले हामी खुशी नै छौँ । विकासनिर्माणका काममा नगरवासीले पनि आवश्यक सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
राससः स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?
राससः स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्या केके आइपर्छन् ?
खड्काः स्थानीय तहमा काम गर्दा सामान्य समस्या देखा पर्ने गर्छ । प्रतिशोध भएका मानिस समाजमा धेरै नै हुन्छन् । राजनीतिक प्रतिशोध पनि भइरहेकै हुन्छ । यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा समस्या पनि हुने गरेको छ । सामान्य विकास निर्माणको काममा पनि समस्या आउने गरेको छ तर पनि यस्ता समस्यालाई समाधान गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । केही व्यक्तिबाहेक सबै नगरवासीले हामीलाई सहयोग गरी रहनुभएको छ ।
राससः केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ?
राससः तपाईंको कार्यकालमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ?
राससः नगरपालिकामा तपाईंले चाहेर पनि गर्न हुन नसकेको विकासनिर्माणका कार्य केके छन् ?
राससः नगरपालिकाले खेलकूद विकासका लागि भनेर केकस्ता योजना ल्याएको छ ?
राससः नगरपालिकाको विकासनिर्माणमा कोरोना भाइरसले कतिको प्रभाव पा¥यो ?
खड्काः खासै प्रभाव परेन । सर्लाही जिल्लामा रहेका बीस वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम कोरोना प्रभावित स्थानीय निकायका रुपमा लालबन्दी थियो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिका साथै नगरवासीको उच्च सतर्कताका कारण यहाँ कोरोना भाइरसले त्यति धेरै प्रभावित बनाएन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नफैलिएको भए अलि बढी विकासनिर्माणको काम हुन्थ्यो भने कोरोना भाइरस फैलिएपछि त्रासका कारण सोचे जति विकासनिर्माणको काम नभए पनि काम रोकिएन । विकासनिर्माणका लागि नगरले व्यवस्था गरेको केही बजेट कोरोना व्यवस्थापनका नाममा खर्च भयो । अरु विकासनिर्माणका काममा नगरमा खासै प्रभाव नपरे पनि बाहिरबाट आउने विकासनिर्माणका काममा प्रभाव भने अवश्य परेको थियो । अहिले केही सहज हुन थालेको छ ।
राससः स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
राससः अन्य जनप्रतिनिधिसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
खड्काः चुनावी मैदानमा हुँदा जुन पार्टीबाट चुनाव जिते पनि जनप्रतिनिधि भएपछि कतै पनि राजनीतिक सङ्केत देखिएको छैन । नगरका विकासनिर्माणमा सबै जनप्रतिनिधि साथीहरुले साथसहयोग दिइरहनुभएको छ । सबैसँगको छलफल र सल्लाहअनुसार नगरको विकासनिर्माण चलिरहेका छन् ।
विराटनगरमा होली पर्वको उल्लास ४ हप्ता पहिले
दशैंका लागि देशभर सार्वजनिक सवारीलाई रुट इजाजत खुला २ वर्ष पहिले
टुसाल–जोरपाटी सडकखण्डमा कालोपत्र शुरु २ वर्ष पहिले
एजेण्डा सेट गर्न टेकोको उपयोग ! ए टेकाहरु हो ! कति प्रदेश हुनुपर्छ रे ….?? २ वर्ष पहिले
हुसैन र लक्ष्मीको चाकन चुकुन ४ महिना पहिले